अख्तियारलाई सुरुमै झट्का, २ अर्बको मुद्दामा विक्रम पाण्डे ४ करोड धरौटीमै रिहा ! « GDP Nepal
अख्तियारलाई सुरुमै झट्का, २ अर्बको मुद्दामा विक्रम पाण्डे ४ करोड धरौटीमै रिहा !
Published On : 16 January, 2019 8:41 pm
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता विक्रम पाण्डेविरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइएको आरोप लागिरहेका बेला विशेष अदालतले न्यून धरौटीमा उनलाई रिहा गरेको छ ।
विशेष अदालतले पूर्ववनमन्त्री तथा कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रमुख पाण्डेलाई बुधबार ४ करोड धरौटी बुझाएर रिहा गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
जबकि पाण्डेविरुद्ध २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगले पाण्डेसँग सोहि रकम बराबर विगोसहित दुई वर्ष कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
विशेष अदालतका रजिष्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठका अनुसार पाण्डेलाई अदालतले आज हाजिर हुन भनिएअनुसार पाण्डे हाजिर भएर बहसपछि ग्लोबल बैंकको बैंक ग्यारेन्टी राखेपछि धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।